Mino izahay fa afaka mitondra be ho anà tontolo iray tsara kokoa ny Aterineto malalaka sy mivelatra. Ho fitandroana ny Aterineto halalaka sy hivelatra, angatahanay ireo vondrom-piarahamonina, indostria sy firenena mba hanaiky ireo fepetra ireo. Mino izahay fa hanampy fahaiza-mamorona, zava-baovao sy fiarahamonina mivelatra kokoa izy ireo.
Mifanome tànana amin'ny hetsika iraisam-pirenena iray izahay hiarovana ny fahalalahanay noho ny finoanay fa mendrika ny hiadiana azy ireo.
Ndeha hiresadresaka momba ireo fepetra ireo — ankasitraho na lavo izy ireo, miadia hevitra momba azy ireo, mandikà teny azy ireo, raiso izy ireo ho toy ny anao manokana ary velabelaro ilay adihevitra any amin'ny vondrom-piarahamonina misy anao — izay ny Aterineto irery ihany no afaka manao izany.
Mifanomeza tànana aminay amin'ny fitandroana ny Aterineto halalaka sy hivelatra.
Mijoro ho an'ny Aterineto malalaka sy mivelatra izahay.
Manohana ireo dingana mangarahara sy fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny politikan'ny Aterineto sy ny fametrahana ireo fepetra fototra dimy izahay:
Fitenenana: Aza sivanina ny Aterineto.
Fidirana: Fanandratana ny fidirana eran-tany ao amin'ireo tambajotra haingam-pandeha sy takatry ny maro.
Fivelarana: Fitandroana ny Aterineto ho tambajotra mivelatra izay mamela ny olona hifandray an-kalalahana, hifanerasera, hanoratra, hamaky, hijery, hiresaka, hihaino, hianatra, hamorona ary hanavao.
Fanavaozana: Miaro ny fahalalahana hanavao sy hamorona tsy misy fieràna. Aza sakanana ny teknolojia vaovao, ary aza manasazy ireo mpitondra fanavaozana noho ny hetsik'ireo mpampiasa azy ireo.
Tsiambaratelo: Miaro ny tsiambaratelo ary miaro ny fahafahan'ny rehetra hanara-maso ny fampiasàna ny rakitra sy ny fitaovan'izy ireo.